RASMI: Macallin Jose Mourinho oo magacaabay Kabtanka kooxda Man United ee xilli ciyaareedka 2018/19 – Gool FM
(Manchester) 21 Luulyo 2018. Antonio Valencia ayaa sii ahaan doona Kabtanka kooxda Manchester United xilli ciyaareedka cusub ee 2018-19.
Antonio Valencia ayaa calaamadda hoggaaminta Man United ka dhexli doona Michael Carrick xilli ciyaareedkan 2018-19 horyaalka Premier League sida uu xaqiijiyey macallin Jose Mourinho.
Ciyaaryahan Valencia ayaa calaamadda Kabtannimo ee Man United xirnaa inta badan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, kaddib Michael Carrick oo dhaawacyo garoomada kaga maqnaa.
Michael Carrick ayaa ciyaaraha ka fariistay waxaana uu ka mid noqday waaxda shaqaalaha Mourinho ee kooxda, waxaana calaamadda kabtannimo ee kooxda Man United sii ahaan doona xiddiga xulka qaranka Ecuador ee Valencia.
Tababare Jose Mourinho ayaa warkan xaqiijiyey isagoo ku guda jira kulamada isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee ay kooxdu ku joogto dalka Mareykanka.
“Kabtan waxaa ahaa Valencia kal ciyaareedkii tagay, waxaana aaminsanahay inuu kabtan sii ahaan doono, marka uusan ciyaareyn waa inaan sameynaa go’aano,” Jose ayaa sidaa u sheegay Saxaafadda.
“Waxay ku xiran tahay cida garoonka ku jirta, haddii uu Smalling garoonka ku jiro, Ashley Young, Herrera ama Juan Mata, Haddii ay Garoonka ku jiraan dooq ayay leeyihiin oo waa la xulan karaa.”
“Matic wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka uu ku noqon karo Kabtanka Manchester United, laakiin wuxuu yimid hal sano uun ka hor.”
“Marna ma daneeyo Kabtanimada, waxaan daneeyaa oo daryeelaa nolosha qolka dhar-badelashada iyo hoggaamiyayaasha, Kabtanka waxay la micno tahay waxa ay la micno tahay.”
Valencia ayaa kooxda Manchester United ku soo biiray sanadkii 2009-kii, waxaana uu kooxda u saftay 330 kulan tartammada oo dhan.
Kooxda Man United ayaa barbaro 1-1 la gashay naadiga Club America kulankeedii ugu horreeyey ee isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub, iyadoo kulankeeda xigana kula ciyaari doonta Rose Bowl kooxda AC Milan 26-ka bishan July.
Kooxda Roma oo ku fikireysa inay lasoo saxiixato goolhaayaha kooxda Arsenal Petr Čech